နေဘုန်းလတ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » နေဘုန်းလတ်
Posted by kai on May 2, 2010 in News, World News |4comments
Time Magazine နေဘုန်းလတ်
ဒီနေ့ စာတိုက်မှာရောက်နေတဲ့ တိုင်းမဂ္ဂဇင်းလေးတွေ့တော့ ..ဒီတပါတ်ထူသားပဲဆိုပြိး အဖုံးကြည့်မိပါတယ်။
အဖုံးက ဒရော့ဘာ၊ လေဒီဂါဂါနဲ့ ကလင်တန်ပုံ.. တွေပါပြီး (the 100 most influential people in the world )ရေးထားတော့..
ထုံးစံအတိုင်း ဒေါ်စုတယောက်တော့ ပါဥိးမှာပါဆိုပြီး လှန်လှောကြည့်ပါတယ်။
မတွေ့ဘူးဗျ.။ အဲဒါနဲ့..သေသေချာချာ ထပ်ကြည့်တော့ .. စာမျက်နှာ ၁၄၄ မှာ Heroes ဆိုပြီး အောက်ဆုံးကအတိုင်း(မူရင်း)ရေးထားတာလေး တွေ့ပါတယ်။
တိုင်မ်းမဂ္ဂဇင်းဆိုတာ ကမ္ဘာတည်သရွေ့ ရှိသွားမဲ့ ကမ္ဘာကျော်မဂ္ဂဇင်းကြီးပါ။ အဲဒီမှာ ဟီးရိုးအနေနဲ့ ကလင်တန်နဲ့တွဲပြီး ခေါင်းစဉ်တူအောက်မှာ ဗမာလူငယ် နေဘုန်းလတ် အမည်ပါတယ်ဆိုတော့..။
အဲဒီလိုလူတွေနေတဲ့ တိုင်းပြည်(အမိမြန်မာပြည်) တနေ့နေ့တချိန်ချိန်မှာ ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းရောက်လာမယ်လို့..ထင်မိပါတယ်။
By Salman Rushdie Thursday, Apr. 29, 2010
here are two photos of Nay Phone Latt that I love. In the first one, he’s inavacant lot flyingakite. In the other, he’s standing in front ofawall-size King Kong poster,adinosaur lunging for his right ear.Looking at these, it takes no great leap to guess what he is:apoet and blogger. And since he lives in Burma, you can guess what else he is:aprisoner.
Read more: http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1984685_1984949_1985235,00.html#ixzz0mlHRc3mM
ဂုဏ်ယူပါတယ် ခင်ဗျာ အခုလိုသိရလို့ တကယ်တော့ ကိုနေဘုန်းလတ်(Blogger) ဟာ တကယ့် စိတ်ဓါတ်ရှိတဲ့ မြန်မာ Blogger လူငယ်တစ်ယောက်ပါ.. ။
ပွဲလန်.ရင်းဖျာခင်းချင်လို. ပွဲဆူအောင်လုပ်ပေးတာဆိုရင်တော. ကျနော်တို.ဗမာတွေဘဲနာမှာပါနော်.
ကျနော်အမြင်ကတော .သူများတွေချီးကျူးခံရတာထက် ကိုယ်လူမျိုးတွေကအနစ်နာခံလုပ်သူတွေကို
ငါတို.အားလုံးအတွက်လုပ်နေပါလားလို. သိကြဘို.က ပိုလို.လိုအပ်ပါတယ်၊
ဘယ်က ကမ္ဘာတုန်း အသိမှတ်ပြုတာ။